ShweMinThar: ✈ ဘတ်ဂျက်ခရီးသွားဖို့ပိုက်ဆံဘယ်လိုစုမလဲ ✆﻿
✈ ဘတ်ဂျက်ခရီးသွားဖို့ပိုက်ဆံဘယ်လိုစုမလဲ ✆﻿
🤔 💴 🤔💴🤔💴🤔💴🤔💴🤔💴
အခုလိုခေတ်ကြီးထဲမှာ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အလုပ်တွေလုပ်နေကြရတယ်။ အလုပ်တွေလုပ်နေမှလဲ နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ လူနေမှု့ဘဝအတွက် အဆင်ပြေပြီး အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်မယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပိုက်ဆံပိုက်ဆံ ပိုက်ဆံရဲ့နောက်ကို လိုက်နေရင်းနဲ့ပဲ လကုန်လို့ရှိရင် အိမ်ဖိုး၊ အကြွေးစာရင်း၊ ဟိုဟာလဲဝယ်ချင်တာ ဒီဟာဘေးဝယ်ချင်တာနဲ့ လစာဆိုတာ လစဉ်လတိုင်း ဘယ်နားရောက်လို့ရောက်သွားမှန်းမသိ။ တစ်လရက်သုံးဆယ်မှ နားရက်ဖယ်လိုက် ရက် ၂၄ ရက်လောက်ကို ငွေနောက်လိုက်နေရင်း တခါတလေ လကုန်လို့ခရီးသွားချင်တာတောင် မသွားလိုက်ရတဲ့ခရီးတွေက အများသားပဲ။ အစကကျွန်တော်ဆို လကုန်ရင် ဒါဝယ်မယ် ဒီသွားမယ် ဟိုဟာလုပ်ချင်တယ် ဒါလုပ်ချင်တယ်နဲ့ ချင်တွေအရမ်းများတယ်။ နောက်ပိုင်း ခရီးသွားတာလဲများလာရော ကျွန်တော့်ရဲ့ ချင်တွေကို အနည်းငယ်တော့ လျှော့ချခဲ့တယ်။
ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာက ကျွန်တော်တို့ အသိုင်းအဝိုင်းမှာပဲ ခရီးသွားပါလို့ပြောလိုက်ရင် ပိုက်ဆံကဘယ်သူပေးမှာလဲ။ ဘယ်ကပိုက်ဆံနဲ့သွားရမှာလဲလို့ ပြောနေကျတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက် အကြံကောင်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးချင်တာပါ။ ကျွန်တော်ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်လဲအခုချိန်ထိ လစာဆိုတာ သုံးရင်သုံးသလောက်ကုန်တုန်းပဲ။ တစ်ခုလုပ်ချင်မှတော့ တစ်ခုကိုရင်းရမှာပဲလေ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ နေ့စဉ်ငွေနောက်လိုက်ရင်း ငွေကပဲအမြဲနိုင်နေတော့ အဲ့ငွေကို ကျွန်တော်တို့ ပြန်ပြီးစီစစ်သုံးသပ်ရမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှု့အတွက် အသုံးချကြည့်ရအောင်။ အခုပြောပြမှာက အလုပ်တွေလုပ်နေပါလျှက်နဲ့ လကုန်လို့မှ ပိတ်ရက်လေးရှိတာတောင် ရည်မှန်းထားတဲ့ခရီးမသွားလိုက်ရတဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက် အထောက်အကူဖြစ်ရင် ဒန်ဒန်ကျေနပ်ပါပြီ။ တကယ့်ကိုခရီးသွားဝါသနာပါတဲ့ လူငယ်တွေအတွက်လဲရည်ညွှန်းပါတယ်။
တစ်လ တစ်လ စားချင်တယ်။ဝတ်ချင်တယ် စတဲ့ချင်တွေကို လျှော့ပြီး ခရီးသွားချင်တာလေးကို စိတ်ထဲထားလိုက်ပါ။ စားချင်တာတွေတော့ ခရီးသွားရင်းစားလို့ရပေမယ့် ဝတ်ချင်တဲ့စိတ်လေးတွေကိုတော့ အပြတ်သားဆုံး အဲ့လလေးမှာ ထိန်းထားလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ဆိုလဲ အဝတ်အစားအမိုပ်စားလေးတွေမြင်ရင် တကယ်လိုချင်တာ။ လကုန်ရင်တော့ ငါပြေးဝယ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပေမယ့် ကျွန်တော်သွားချင်တဲ့ ခရီးလေးတစ်ခုရှိခဲ့ရင်တော့ အဲ့စိတ်လေးကို ထိန်းထားခဲ့ရတဲ့ လတွေ အများကြီးပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့ခရီးစဉ်ကို ကိုယ်ကတကယ်သွားချင်တာကို။ ပြီးတော့ခရီးသွားဖို့ဝတ်စရာမရှိဘူးဆိုတာမျိုးလဲ ကျွန်တော်တို့ကြားရတက်တယ်။ ခရီးတစ်ခုသွားတယ်ဆိုတာ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ အဝတ်အစားတွေဆို အဆင်ပြေပြီလေ။ ထွေထွေထူးထူး အလှုအိမ်သွားသလို အသစ်တွေဝတ်နေစရာမှ မလိုတာ။ အဲ့တော့ အသစ်တွေဖြစ်စရာမလိုဘူး ကိုယ်သွားမယ့်ခရီးနေရာလေးတွေမှာ ပုံလေးတွေလှနေဖို့အတွက် လိုက်ဖက်တဲ့ အရောင် ဒီဇိုင်းလေးတွေရှိရင် အဆင်ပြေပြီလေ။ ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ မရှိရှိတာတွေ ထုတ်ဝတ်တာပဲ။ ခရီးသွားလို့ မသစ်သာဝတ်လိုက်ရင် ပြန်ရောက်စုတ်ပြတ်သတ် တကယ်နှမြောစရာကောင်းတယ်။ အဲ့တော့ ချင်လေးတွေလျှော့ပြီး ခရီးသွားဖို့အတွက် ပိုက်ဆံစုပါ။
ကိုယ်သွားမယ့်ခရီးစဉ်မှာ ဘယ်ဟိုတယ် ဘယ်ဆိုင် ဘယ်လိုသွားရင် သက်သာလဲအမြဲတမ်းလေ့လာပါ။ တချို့နေရာတွေက ချွေတာဖို့အဆင်မပြေပေမယ့် တချို့နေရာလေးတွေမှာ ချွေတာလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ ကလောကို Trekking သွားရင် တည်းမယ့်ဟိုတယ်က အရမ်းကောင်းနေစရာမလိုဘူးလေ။ တနေကုန်သွား ပြန်လာမောနေပြီဆိုတော့ တုံးကနဲ အိပ်ပျော်သွားမှာပဲ။ ကျွန်တော်ဆိုအမြဲဟိုတယ်ဆို အကောင်းကြီးတွေမတည်းဖြစ်တာများတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တနေကုန် အဲ့ခရီးမှာ ပတ်သွားနေမှာလေ။ ကျွန်တော်ဟိုတယ်ပြန်နားတယ်ဆိုတာ တော်တော့်ကို ရှားတယ်။ တနေကုန်မမောမပန်းပတ်လစ်တာပဲ။ အစားအသောက်မှာလဲ ဆိုင်ကြီးဆိုင်ကောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ ဈေးထဲကဆိုင်တို့ ဒေသစာလေးတွေပတ်ပြီးစားတာက အရမ်းသက်သာတယ်။ ကျွန်တော်ဘတ်ချက်နဲ့ခရီးသွားရင် ဈေးတွေထဲကဆိုင်လေးတွေမှာပဲ စားတာများတယ်။ စားရတာလဲမြိန်နေတာပဲ။ တစ်ခုမှာချင်တာက ဘတ်ချက်နဲ့ခရီးခရီးစဉ်တစ်ခုကို ရောက်ဖူးရုံပဲဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့မသွားဖို့ပဲ။ ဘတ်ချက်ဆိုပေမယ်မယ့် ရသလိုနေရာမှာ ပျော်စရာတွေရှာပါ။ အပေါ်ကပြောတဲ့ချင်စိတ်လေးတွေတော့ဖျောက်ထားပေါ့။ အဓိကက ဘတ်ချက်ခရီးမှာ ဝယ်ချင်တဲ့စိတ်လေးတွေဖျောက်ထားလိုက်။ စားတာနေတာထိုင်တာက ရောက်တဲ့နေရာ ခရီးထွက်နေရတာဆိုတော့ အကြိုက်ပျော်လို့ရတယ်ဟုတ်။ ဈေးဝယ်ထွက်လို့ကိုယ့်အရမ်းကြိုက်တဲ့အရာလေးတွေရှိလာခဲ့ရင်တောင် သွားမကြိုက်ဘူးလို့ခေါင်းခါပစ်လိုက်ပါ။
3. လစဉ် နဲနဲများများ စုပြီးအမွဲခံပါ။
ခရီးသွားဖို့အတွက်စိတ်ကူးလေးများရှိရင် ဒါလေးတော့မဖြစ်မနေလုပ်ပါ။ တစ်လမှာ အနဲဆုံးတော့ ကိုယ်ပေးစရာတွေ ဝယ်စရာတွေဝယ်ပြီးရင် တခြားသုံးငွေလေးတွေချန်ထားပြီး ရသလောက်လေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးစုထားပါ။ ပိုက်ဆံမစုတက်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် အဲ့အရာက တော်တော်တော့ခက်ခဲတာဗျ။ တစ်လတစ်လမှာ အဲ့လိုစုဖို့ကျန်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်အရှားသားပဲ ဟီးဟီး။ ဒါပေမယ့် ငွေတွေရှာနေရင်းနဲ့ ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာလေးတွေ ကိုယ်စားချင်တဲ့အရာလေးတွေရဖို့တော့ မရရအောင်ကြိုးစားစုရမှာပဲ။ အဲ့တော့ ပိုက်ဆံပြတ်ပြီး မွဲနေတာ နယ်ဝေးမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူငယ်တွေတော်တော်များများဖြစ်နေကျပဲ။ အဲ့တော့ သုံးပြီးလဲ မွဲတာပဲ စုလိုက်လို့လဲမွဲတာပဲ အဲ့တော့ လစဉ် နဲနဲများများ စုပြီးအမွဲခံပါ။ အမွဲခံရတာလဲ တန်တယ်လေ။
ခရီးမသွားနိုင်ဘူး ပိုက်ဆံမရှိဘူးဆိုသော သူများကို အပေါ်ကနည်းလမ်းများပြောပြပြီး အတူတူခရီးထွက်ပါ။ အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ ဘတ်ချက်ခရီးစဉ်လေးက ပြီးပြည့်စုံမှာပေါ့။ ကိုယ်ကလက်ဆောင်တွေဝယ်ချင်နေရင်တော့ သူက မဝယ်နဲ့ပိုက်ဆံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားအရင်ကြားရလိမ့်မယ်။ ကဲစိတ်ချမ်းသာစရာမကောင်းဘူးလားပြော။ ဘတ်ချက်ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံး အဲ့လိုလူမျိုးနဲ့ဆို ပျော်ပျော်ကြီးသွားလို့ရတယ်။ ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ ဘော်ဒါများနဲ့ခေါင်းစဉ်က သူတွေကလဲ အဲ့လိုလူမျိုးတွေပဲ။ တခါတလေ ကျွန်တော်ဝယ်တာတွေ စားတာတွေများသွားရင် ကိုဒန်နီရယ် အရမ်းများနေပြီနော်လို့ တားတက်ကြတဲ့သူမျိုးတွေ။ ကျွန်တော်တို့ဘော်ဒါတွေအားလုံးမရှိရှိ့တဲ့ကြားက ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ ကိုယ်ပျော်ရမယ့် ခရီးတွေကို ကြိုးစားပြီးသွားနေကြတာပဲ။ မွဲဖော်မွဲဖက်တွေရုံးထဲပတ်ရှာကြမယ်ကွာ။
ကျွန်တော့်ဘော်ဒါတွေထဲမှာလဲ တော်တော်များများတွေ့ဘူးတယ်ဗျ။ HR က အမကြီးအတွက် ဟာ IT ကအကိုအတွက်မေ့နေပြန်ပြီ စသဖြင့် တစ်ယောက်ချင်းစီကို အိမ်ပြန်လက်ဆောင်တွေ ဝယ်ချတော့တာပဲ။ အဲ့အတွက် အကြံကောင်းပေးချင်တာက အထုပ်လိုက်ဝယ်သွားလိုက် ပြီးရင်စားပွဲပေါ်ချထားလိုက် ကဲလာယူကြခရီးသွားရင်းဝယ်လာတာ။ အထုပ်လိုက်ဆိုတာကလဲ အများကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် နေကြာစေ့အထုပ်လိုက်တို့ ပဲလှော်အထုပ်လိုက်တို့ ပိုက်ဆံလဲဘယ်လောက်မှမကုန်ရယ်။ အဲ့လိုချွေတာပြီး အိမ်ပြန်လက်ဆောင်ကိုလဲဝယ်တက်ရတယ်။ တစ်ယောက်ချင်းစီကို သေချာလိုက်ဝယ်ပေးနေရင် ကိုယ်က သွားတာမှ ဘတ်ချက် ဝယ်လို့ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်ဆိုခရီးတစ်ခုသွားပြီးပြန်လာတိုင်း အဲ့လိုမစီမာအထုပ်လိုက်တို့ နေကြာစေ့အထုပ်လိုက်တို့ဝယ်ပြီး ခုံပေါ်တင်ပေးထားလိုက်တယ်။ တွေ့တဲ့သူတိုင်းနဲနဲကျွေးဆိုပြီးကောက်စားသွား အလှူလုပ်သလိုပဲကျေနပ်။ အဲ့တော့ နောက်တစ်ချက်က အိမ်ပြန်လက်ဆောင်တွေလျှော့ပါ။
6. ၂၀၀ ဖိုးသွားတစ်ထောင်ဖိုးရိုက်
ဒါကလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်လေ။ ကိုယ်ခရီးစသွားထဲက ပုံလေးတွေလှလို့ ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ချင်လို့ သွားကြတာကြည့်ပဲ။ အဲ့တော့ ကိုယ်သွားခဲ့တဲ့ခရီးတစ်ခုမှာတော့ ၂၀၀ ဖိုးပဲသွားသွား ဘယ်လောက်ဖိုးပဲသွားသွား ရိုက်ကိုရိုက်ရမယ်။ အဲ့လိုခရီးသွားဖို့ ပိုက်ဆံတွေစုပြီးအမွဲခံခဲ့ရတာလေ။ အဲ့တော့ ကိုယ်ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ အလှဆုံးဖြစ်အောင် ဓါတ်ပုံရိုက်ပါ။ Facebookပေါ်တင်ပါ။ အဲ့တော့မှ ဟာလှလိုက်တာ မိုက်တယ်ကွာ ဆိုတဲ့ Comment လေးတွေဖတ်ပြီး ခရီးစဉ်က ပိုပျော်ဖို့ကောင်းမှာ။ ပြီးရင်အဲ့ခရီးစဉ်က ဘယ်လောက်သက်သာကြောင်း သူတို့ကို ပြန်ကြွား ဟီးဟီး။
တစ်ချို့ဆို ၁၀၀၀ ဖိုးသွားပြီး မလှမပပုံတွေရလာတာအများကြီး။ ကိုယ်တွေက ၂၀၀ ဖိုးနဲ့လှတယ်လေ။ ဘာပြောပြောတန်တယ်ပေါ့။ အဲ့ ၂၀၀ ဖိုးခရီးစဉ်လေးတွေဖန်တီးလိုက်ရအောင်ကွာ။
ကဲ အခုကျွန်တော်ပြောကြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာမှ ဘာတွေထပ်ပြီးဖြည့်စွက်ရအုံးမလဲဆိုတာ အောက်က ကွန့်မန့်မှာ ပြောပြပေးခဲ့ပါအုံး။ လူငယ်တွေ အားလပ်ရက်မှာ ခရီးတွေထွက်ပြီး အလုပ်မှာပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်လဲရည်ညွှန်းပါတယ်ဗျ။ အလုပ်တွေလုပ်နေရပြီး ကိုယ်ပျော်ရွှင်မှု့အတွက်ရအောင်ရှာပါ။ လူငယ်တွေငွေနောက်လိုက်နေရင်း ငွေရဲ့ကျေးကျွန်မဖြစ်သွားပါစေနဲ့ဗျ။ ကျွန်တော်ပြောနေကြအတိုင်း သွားတုန်းရှိတုန်းရယ်ပါ။ စိတ်ရှိတိုင်းပျော်ရွင်ပါ။ ကျန်းမာငယ်ရွယ်တုန်း ခရီးသွားပါ။ လူငယ်တွေအားလုံး ကိုယ့်ရဲ့နှစ်သက်ပျော်ရွင်ရာမှာ အလုပ်လုပ်နိုင်ကြပြီး ခရီးတွေလဲအများကြီးထွက်နိုင်ကြပါစေ။ နောက်ထပ်လဲ ဒန်ဒန့်ရဲ့ဘတ်ချက်ခရီးတွေအများကြီးကို ပြောပြပေးပါအုံးမယ်ဗျ။ အခုတော့ ကိုယ့်ရဲ့မွဲဖော်မွဲဖက်လေးတွေကို မန့်ရှင်းခေါ်ပြီး ဒီဇင်ဘာပိတ်ရက်မှာ ခရီးစဉ်လေးတစ်ခုစီစဉ်ကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။ အားလုံးကို ချစ်တယ် မွမွ။
မူရင်းစာမျက်နှာသို့ - Daniel ´s Choices
Posted by Alex Aung at 4:06 AM
Labels: ခရီးသွား, ဆောင်းပါး
Grilled Fish ငါးကင် - Prawn Pasta (ပုစွန်ပါစတာ) - ...
- ဘယ်လောက် အလေးပမာဏနဲ့ ဆော့ရမလဲ ??? -
HR ကကော ဘာများတတ်နိုင်ဦးပါမည်နည်း
Phone Camera တွေရဲ့ Manual Mode ကို အသုံးပြုနည်း
Professional နဲ့ Passion
ကြက်သားဟင်းနဲ့ ပြည် ပလာတာချက်နည်း (၂) နည်း
❄ ရွက်လှပန်း ❄
အွန်လိုင်းမှာ အခပေးသင်တန်းတွေ ဘယ်လိုတက်မလဲ...
💥 ဦးစားပေးစနစ် နှင့် အခွင့်အရေးယူတတ်ကြသူများ 💥
Noodle Soup with Prawn (ပုစွန်ခေါက်ဆွဲပြုတ်) - အုန...
နေဝင်ချိန်မှာ လှပတဲ့ဓါတ်ပုံများရအောင် ဘယ်လိုရိုက်မ...
ဘယ်လို အခြေအနေတွေက သင့်ကို ကြွက်သားတက်စေမလဲ ???
သေးငယ်ကျစ်လျစ်သော ၀န်ကြီးအဖွဲ့ (Small Cabinet) မူက...
မုန့်ပေါင်း - တိုရှည် - Basil Chicken Pizza Roll -...
➳ ရွှေဘို မှာ လည်စရာ ပေါပါတယ်
`ကော်လာဂျင် ထုတ်လုပ်မှု တိုးဖို့ နည်းလမ်းများ ´
"Fitness Model Body မျိုးပိုင်ဆိုင်လိုပါက"
`မူးယစ်​​ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်းနဲ့ စွဲလမ်းခြင်းကို ခွ...